सुर्खेतमा कुपोषित बालबालिकाको संख्या बढ्दै, ६ महिनामा तीन सय ३० जनामा कुपोषण
फागुन २९, सुर्खेत । सुर्खेतमा कुपोषित बालबालिकाको संख्या बढ्दै गइरहकेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका अनुसार सुर्खेतमा यो वर्षमा ३ सय ३० जना बालबालिका कपोषणमा परेका छन् । चालु
फागुन २९, चितवन– युएस–बाङ्ला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा वरिष्ठ न्युरो सर्जन बालकृष्ण थापाको निधन भएको छ। डा. थापा भरतपुरको चौबिसकोठीमा रहेको चितवन अस्पताल प्रालि तथा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत
प्रधानमन्त्रीले भने, देब्रे घुँडा र दाहिने घुँडा छुट्याउनै नसक्ने कसरी डाक्टर भए ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको ध्येय भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, गरेको पनि सहन्न, आफ्नो कार्यकालमा देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँछु ।’
फागुन २५, टोरन्टो । तलब बढाउन माग गर्दै आन्दोलन गरिएका समाचार प्रशस्तै आउने गर्छन् तर क्यानाडामा भने तलव नबढाउन माग गर्दै डाक्टरहरुले आन्दोलन थालेका छन्। ‘हामीलार्इ धेरै तलब दिइएको छ’
एक अर्बको घरजग्गा दान गर्नेको नाममा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना
फागुन २४, नेपालगञ्ज । नेपालगञ्जस्थित फत्तेवाल आँखा अस्पताललाई काठमाडौँको आफ्नो करिब एक अर्बको घरजग्गा दान गर्ने दानवीर श्रीजङ शाह र उनकी धर्मपत्नी रुद्रकुमारी शाहको नाममा बर्दियामा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना
महिलामा मिर्गौला रोग बढ्दै
फागुन २४, काठमाडौं । विश्वभर मिर्गौलासम्बन्धी रोगबाट १९ करोड ५० लाख महिला प्रभावित भएका छन्। त्यसमध्ये मिर्गौला रोगका कारण प्रत्येक वर्ष विश्वमा छ लाख महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालमा
कुष्ठरोगीको संख्या घट्दो पाल्पामा
फागुन २३, रामपुर, पाल्पा । पाल्पा जिल्लामा यस आर्थिक वर्षमा १५ जना कुष्ठरोगका बिरामी फेला परेका छन्। साउनयता पुरुष १० र महिला ५ गरी १५ जना कुष्ठरोगका बिरामी फेला परेको
म्याग्दी स्वास्थ्य शिविरबाट एक हजार लाभान्वित
फागुन २२, म्याग्दी । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–२, बाबियाचौरमा सोमबार सम्पन्न निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट एक हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण लाभान्वित भएका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा मंगला गाउँपालिकाले आयोजना गरेको
झापाको वि एण्ड सीले क्यान्सर उपचारका लागि अत्याधुनिक उपकरण भित्र्याउने तयारी
फागुन १६, झापा, भद्रपुर । झापाको वि एण्ड सी मेडिकल कलेजले क्यान्सर उपचारका लागि अत्याधुनिक उपकरण भित्र्याउन लागेको छ। बि एण्ड सी मेडिकल कलेजले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका
चिकित्सक अमिताभ ठाकुर अप्रेसनको तयारी गर्दागर्दै झगडा गरेर बाहिरिएपछि सम्पर्कविहीन
फागुन १५, उदयपुर । जिल्ला अस्पतालमा कार्ययरत डाक्टर अमिताभ ठाकुर अस्पतालमै कार्यरत डाक्टरहरुसँग झगडा गरेर सोमबार दिउँसोबाट बेपत्ता भएका छन्। अस्पतालमा कार्यरत स्टाफहरुसँग भनाभन गरेर एकाएक अस्पतालबाट बाहिरिएपछि सम्पर्कविहीन भएको